सुझावहरू क्यामिनो डि स्यान्टियागो गर्नका लागि यात्रा समाचार
Susana Garcia | | सुझावहरू, सामान्य, स्यान्टियागो डे कम्ोस्टेला
अधिक र अधिक व्यक्ति तिनीहरूले क्यामिनो डि स्यान्टियागो बनाउँछन् यसको कुनै पनि मार्गहरू द्वारा। यो एक अद्वितीय अनुभव हो, जुन धेरै कारणले गर्दा गर्न सकिन्छ, तर अन्तमा यो लगभग सबै केसहरूमा सन्तोषजनक हुन्छ। त्यसकारण आज हामी तपाईंलाई केमिनो डे स्यान्टियागो गर्नका लागि तयार गर्न केही विचारहरू दिन गइरहेका छौं।
त्यहाँ धेरै छन् केमिनो डि स्यान्टियागोका लागि तयारीका लागि चीजहरू। यो लामो यात्रा हो, विशेष गरी यदि हामी फ्रेन्च वे मार्ग छनौट गर्छौं, जुन कम्तिमा एक महिना लाग्छ, यद्यपि सानालाई शुरुवातका लागि सिफारिस गरिन्छ। जस्तो हुन सक्छ, क्यामिनो डे स्यान्टियागो गर्न यी सुझावहरूमा ध्यान दिनुहोस्।
1 Camino de Santiago को मार्ग छान्नुहोस्
2 ब्याकप्याक बिना र बिना ट्रेन गर्नुहोस्
3 उपयुक्त उपकरणहरू
4 चरणमा योजना
5 अघिल्लो जानकारीको लागि हेर्नुहोस्
6 मौसम राम्रोसँग छनौट गर्नुहोस्
7 एक्लो वा कम्पनीमा?
8 सबै भन्दा पहिले, रमाईलो
Camino de Santiago को मार्ग छान्नुहोस्
स्यान्टियागो डे कम्पोस्टेलामा पुग्न धेरै मार्गहरू छन्, यद्यपि केहि अरूहरू भन्दा बढि लोकप्रिय छन्। कुनै श doubt्का बिना, मार्ग छनौट गर्दा तपाईं बिभिन्न ठाउँहरूमा जान सक्नुहुनेछ र योजना पनि भिन्न हुनुपर्दछ, किनकि त्यहाँ अरूहरू भन्दा छोटो मार्गहरू छन्। सबैभन्दा लामो फ्रान्सेली हो, जसमा करीव stages२ चरणहरू हुन्छन्, यद्यपि प्रत्येक व्यक्तिले यसलाई बिभिन्न रूपमा लिन्छन्। एक महिना यो गर्न न्यूनतम हो। त्यहाँ अरू पनि छन् जुन शुरुआतका लागि राम्रो छन्, जस्तो कि पोर्तुगाली मार्ग, जो पुर्तगाली देश र गलिसिया को दक्षिण बाट आउँछ। क्यामिनो प्रिमिटिभियो पहिले गर्न सकिन्छ र क्यामिनो इन्ग्लस ला कोरुसको क्षेत्रबाट आउँदछ। सडकको अन्त्यको भाग जुन स्यान्टियागोबाट फिनिस्टर र मुक्सियासम्म गरिन्छ जुन सडकको अन्त्यको रूपमा हुन्छ।
ब्याकप्याक बिना र बिना ट्रेन गर्नुहोस्
सबै चरणहरू प्रदर्शन सबैका लागि होईन, किनकि यसलाई केहि हिड्न आवश्यक पर्दछ दिनको २ 25 किलोमिटर। यसैले यो गर्नु भन्दा पहिले थोरै तालिम दिन सिफारिस गरिन्छ। पैदल यात्राको लागि जानुहोस्, शक्ति अभ्यास गर्नुहोस् ताकि तपाईंको पछाडि र खुट्टाहरू आकृतिमा छन् र माथि अभ्यासमा तपाईंको ब्याकप्याक तपाईंको पछाडि। यो फ्ल्याटमा र लोड बिना हिड्न समान छैन, किलोमिटर भरिएको ब्याकप्याकको साथ गर्नु भन्दा।
प्रत्येक चोटि त्यहाँ यस प्रकारका चुनौतीहरू गर्न अझ बढी पेशेवर उपकरणहरू छन्, जसले हामीलाई सडकमा आरामदायक महसुस गर्ने बेलामा धेरै मद्दत गर्दछ। को फुटवेयर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू मध्ये एक हुन गइरहेको छ, र हामीले एक आरामदायी ट्रेकि sh जुत्ता छान्नु पर्छ जुन टाउको राम्रोसँग फिट हुन्छ र सही आकार हो। तपाईंले तिनीहरूलाई पहिले मोल्ड गर्नका लागि उनीहरूसँग ट्रेन गर्नुपर्नेछ। मोजा र आरामदायक कपडाहरू पनि सूचीमा छन्, क्षमतासहितको एक ब्याकप्याक, साथै एउटा सानो प्राथमिक उपचार किट जसमा हामी छालाहरूको लागि ड्रेसिंगहरू र सम्भावित घाउहरूको लागि कीटाणुरहित पार्न सामग्री राख्छौं। सनस्क्रीन, टोपी, परावर्तक कपडा र वर्षाको लागि रेनकोट अन्य चीजहरू हुन् जुन हामीले बिर्सनु हुँदैन। अघिल्लो सूची बनाउनु राम्रो हुन्छ यदि हामीसँग तपाईंलाई चाहिएको सबै छ भने।
प्रत्येक मार्गसँग यसको चरणहरू हुन्छन जुन पहिले नै धेरै नै विभाजित हुन्छ ताकि हामी एक साधारण विचार प्राप्त गर्न सकौं कसरी योजना गर्ने। प्रत्येक दिन एक स्टेज, दिनको प्रारम्भिक घण्टामा मार्गहरू कोशिस गर्दै यस गर्मीको मामलामा दिउँसो र तातो घण्टामा आराम गर्न सक्षम हुन। दिन बित्दै प्रत्येक चरणको योजना बनाउनुहोस् र त्यसपछि तपाईंलाई थाहा हुन्छ कि यसले तपाईंलाई के लिन्छ, तपाईंलाई लाग्छ कि लचिलो हुनुपर्दछ, यो काम होइन, तर केहि चीज जुन तपाईंले रमाइलो गर्नुपर्छ।
अघिल्लो जानकारीको लागि हेर्नुहोस्
वेबमा तपाईंसँग प्रत्येक होस्टल, चरणहरू र तपाईंले सामना गर्नुपर्ने समस्याहरूको बारेमा धेरै जानकारीहरू छन्। अप्रिय आश्चर्यको अपेक्षा गर्न के गर्ने भनेर पहिल्यै थाहा पाउनु राम्रो हुन्छ। को अन्य तीर्थयात्रीहरूको राय चरणहरूको बारेमा ठूलो मद्दत हुन सक्छ।
मौसम राम्रोसँग छनौट गर्नुहोस्
उपकरणहरू तपाईले बोक्नु पर्ने कुरामा धेरै भर पर्न सक्दछ जब तपाईं यात्रा गर्नुहुन्छ। यो गर्न यो सल्लाह दिइदैन मिडसमर, केवल तपाईंले मात्र पाउनु भएको तापको कारणले होईन, तर ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरू जसले यी महिनाहरू छान्छन्, त्यसैले निवास पाउन र गाह्रो हुने बाटो पाउन गाह्रो हुनेछ। यदि, अर्कोतर्फ, तपाईले चाहानु भएको व्यक्तिको समूह भेट्नु हो भने यो उत्तम स्टेशन हुनेछ। जाडोमा यसलाई बेवास्ता गर्नु राम्रो हुन्छ, किनभने कम तापक्रम र वर्षाको दिनमा अनुभव कम रमाइलो हुन्छ।
एक्लो वा कम्पनीमा?
यो अर्को प्रश्न हो जुन हामी आफैलाई सोध्न सक्छौं। निस्सन्देह धेरै मानिसहरू जो कम्पनी छनौट गर्नेछन्, खुशी र सुरक्षाको लागि। यद्यपि यो एक्लोमा पनि गर्न सकिन्छ, सम्भवतः हामी भेट्टाउनेछौं सँगी यात्रीहरू हाम्रो यात्रा मा।
सबै भन्दा पहिले, रमाईलो
बाटो लिनु भनेको अनुभव हो जुन प्रयासको आवश्यक पर्दछ, तर यसका पुरस्कारहरू पनि छन्। बारेमा प्रत्येक चरणको आनन्द लिनुहोस्, ठाउँहरूमा रमाईलो कुनाहरू फेला पार्ने जुन हामी कहिल्यै भेट्दैनौं, व्यक्तिलाई भेटेर र संसारलाई अर्कै तरिकाले हेर्दै। यस अवस्थामा, धेरै अरूलाई जस्तै, यो त्यहाँ पुग्ने बारेमा होइन, तर हरेक मार्गको आनन्द लिनेको बारे हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » क्यामिनो डे स्यान्टियागो गर्नका लागि सुझावहरू